I-Autotarget: Injini yokuThengisa ngokuziphatha ye-imeyile | Martech Zone
NgoMvulo, Novemba 17, 2008 NgoLwesithathu, ngoFebruwari 10, 2016 Douglas Karr
Ukuthengiswa kwedatha konke malunga isimilo sokuziphatha, amanani abantu kunye nokwenza kwangaphambili kubahlalutyi kwithemba lakho ukuze uzithengise ngokukrelekrele. Ndibhale isicwangciso semveliso kwiminyaka embalwa edlulileyo ukuya kubalo Inqaku ababhalisi be-imeyile ngokusekwe kukuziphatha kwabo. Oku kuyakuvumela umthengisi ukuba abeke isahlulo sababhalisi ngokusekwe ekubeni ngubani owayesebenza kakhulu.
Ngokukhomba indlela yokuziphatha, abathengisi banokunciphisa umyalezo, okanye bavavanye imiyalezo eyahlukeneyo, kwabo babhalisi bangakhange bavule, bacofe, okanye bathenge (ukuguqula) kwi-imeyile. Iya kuvumela abathengisi ukuba bavuze kwaye bajolise ngcono kwabo babhalisele kakhulu. Inqaku alizange livunywe ukuba lenze imveliso kunye nenkampani, kodwa enye inkampani inyukele kweli nqanaba lokuthengisa iziseko kunye nokwahlulahlulahlula icandelo, iPost.
iPost isungule injini enamandla kakhulu ekujoliseni isimilo sayo kulungelelwaniso, olubizwa Ukujonga ngokuzenzekelayoTM (cofa ukuze ukwandise umfanekiso):
UCraig Kerr, i-VP ye-iPost yeNtengiso, unikezele ngolwazi olulandelayo malunga nemveliso:
I-iPost's Autotarget ivumela abathengisi ukuba baphucule ngokumangalisayo iziphumo zentengiso ye-imeyile besebenzisa ukuqikelela kubahlalutyi. Ukusetyenziswa kwe-Autotarget kubonisiwe kukonyusa inzuzo yemikhankaso ye-imeyile ubuncinci iipesenti ezingama-20 kunye nokunciphisa kakhulu izaphulelo zamaxabiso kunye nokunyusa amaxabiso avulekileyo.
Enye inkampani, umzekelo, inyuse inzuzo yokuthengisa nge-imeyile ngama-28%, yehlisa izaphulelo, nakule marike inzima, nge-40% kwaye yonyusa amaxabiso avulekileyo nge-90% emva kweenyanga ezimbalwa zokusebenzisa i-Autotarget. I-Autotarget ishenxisa uqikelelo kwaye iyithathe endaweni yendlela eqinisekisiweyo, ezenzekelayo eqinisekisa ukuba i-imeyile elungileyo ithunyelwa kumntu olungileyo ngexesha elifanelekileyo.
Uninzi lwabathengisi be-imeyile bayazingca ngendlela abakhule ngayo kuluhlu lwabo lwe-imeyile. Kwaye, ngokwesiko, baqhumisa ngokufuthi kangangoko banako kubantu abaninzi kuluhlu lwe-imeyile kangangoko. Le ndlela yinkcitho yezixhobo kunye nendlela eqinisekileyo yokuphulukana nabathengi: Ngelixa abanye abathengi bafuna ukufumana ii-imeyile zorhwebo rhoqo, abanye ngokukhawuleza bajonga ii-imeyile njengogaxekile kunye nomthumeli njengomgaxekile.
Itekhnoloji yokuhlalutya yokuqikelela ye-Autotarget yenza umsebenzi onzima kubathengisi ngokuzenzekelayo ngokuzenzekelayo kulwazi esele luqokelele malunga nabathengi? isimilo kuwo onke amajelo abo. Kwaye, intsha nohlobo lwayo lwamva nje, i-Autotarget isebenza naye nawuphi na umboneleli ngeenkonzo ze-imeyile (i-ESP).
I-Autotarget isebenza njani
I-Autotarget iqhutywa yimithombo emibini yedatha: okokuqala, ucofe i-imeyile kwaye ucofe indlela ojonga ngayo kwaye, okwesibini, indlela yokuziphatha yokuthenga ishaneli. I-Autotarget ngokuzenzekelayo kwaye ngokuqhubekayo ifumana i-imeyile cofa kwaye ujonge idatha yokuziphatha ngokuthe ngqo kumnikezeli ngenkonzo ye-imeyile yangoku.
Idatha yokuziphatha kwembali yabathengi ngokuzenzekelayo iba yidatha enokwenzeka
I-Autotarget ingena kwidatha yokuphendula nge-imeyile yemihla ngemihla kunye nokubonisa ngokubonakalayo ukuya kuthi ga kwi-125 ye-personas kunye neenyanga ezili-12? Idatha yokulandelela kwindlela yokuziphatha kwephulo le-imeyile. Nje ukuba ezi personas zisungulwe, i-Autotarget inokukhawuleza ithumele imiyalezo ekujoliswe kuyo kubabhalisi ngokusekwe kwimeko yabo ethile, ukuphucula amathuba okuphendula okuhle.
Sebenzisa iindlela eziqinisekisiweyo kubandakanya uhlalutyo lwe-RFM
Icandelo eliphambili lokudibanisa amaqela kukuhlalutya kwe-RFM (UkuQhubeka kokunxibelelana kokugqibela, Ukuphindaphindeka konxibelelwano, kunye nexabiso leMali lomthengi). I-Autotarget sisisombululo sokuqala se-imeyile esizenzekelayo kunye nokuhlaziya uhlalutyo lwe-RFM kwimikhankaso yokuthengisa nge-imeyile kwi-Intanethi.
Uhlalutyo lwe-RFM lusetyenziswa kakhulu kwihlabathi elingaxhunyiwe kwi-intanethi ukwahlula abathengi kumaqela ngokusekwe kwiindlela zabo zokuziphatha kwimiyalezo ethile. Ixabiso lohlalutyo lwe-RFM kukuba kuye kwaqinisekiswa amashumi eminyaka ukuqikelela ngokuchanekileyo indlela yokuziphatha kwabathengi ngokusekwe kwiindlela zabo zokuziphatha ezidlulileyo kwiindlela ezininzi nakwindlela abaziphatha ngayo abanye abathengi abaneeprofayili ezifanayo.
Zixelelwa ntoni iiseli ze-RFM malunga nentengiso kunye nezaphulelo
Ngokuhambelana, abathengi abanexabiso eliphezulu leeseli zeRFM bazibandakanya kakhulu nophawu, kwaye kunokwenzeka ukuba baphendule kwisibonelelo kwaye bafune isezantsi, bambalwa okanye, mhlawumbi, akukho saphulelo. I-iPost's Autotarget RFM igrafu ibonisa ngokuthe ngqo ukuba bangaphi abathengi kwiseli ye-RFM ephendulileyo (ecofa, ibonwa, kwaye ithengiwe) kuyo nayiphi na iseti yemiyalezo ekhethiweyo. Ukuxhotyiswa ngale datha, abathengisi banokwenza ngokukhawuleza nangokulula iziqendu zabathengi ngokusekwe kwimpendulo yabo yeseli ye-RFM ukulungiselela ukuthengisa okusebenzayo.
I-Autotarget ithatha imizuzu emi-5 ukuyisebenzisa
Akukho saveyi okanye iifom ziyafuneka, ukanti i-100% yesiseko sababhalisi icwangcisiwe nge-Autotarget. Abathengi bavelisa idatha ngalo lonke ixesha benxibelelana nomyalezo we-imeyile okanye bethenga nanini na kunxibelelwano (iwebhusayithi, iPOS, okanye indawo yokufowuna). Isishwankathelo, i-Autotarget inamandla, kodwa iyakhawuleza kwaye kulula ukuyisebenzisa, isisombululo.
tags: ukuqhubacraig kerrUkuziphatha kwabathengiUkujolisa kwi-imeyilefrequencyipostngesantyaUkuqonda kwakhonarfmUhlalutyo lwe-rfm